Imelite ndụ nke ndị ọrịa na-arịa ọrịa akụrụ ugbu a
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Imelite ndụ nke ndị ọrịa na-arịa ọrịa akụrụ ugbu a
Mmemme bu n'obi ime ka ọrịa akụrụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu na ịbawanye ohere ịnweta dialysis nke ụlọ na ntụgharị akụrụ.
DaVita Integrated Kidney Care (DaVita IKC) - yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị dọkịta akụrụ 1,000, ndị na-enye transplant, ndị na-ahụ maka ụlọ ọgwụ na ndị na-ahụ maka nlekọta dị elu - taa kwupụtara mmalite nke mmemme nlekọta 11 bara uru n'ofe US, nke a na-atụ anya iru 25,000 akụrụ. ndị ọrịa. Ebumnobi nke mmemme a bụ iji nyere aka belata ọganihu nke ọrịa akụrụ na-adịghị ala ala (CKD) ma nyere ọtụtụ ndị ọrịa nwere ọdịda akụrụ aka inweta transplant akụrụ na dialysis n'ụlọ ha.
Mmemme ndị a bụ akụkụ nke usoro gọọmentị afọ ofufo ọhụrụ Nhọrọ Nlekọta Kidney (KCC)—ngosi nlekọta nlekọta dabere na uru malitere na Jan. DaVita IKC na ndị mmekọ ya na-esonye na nhọrọ nkwekọrịta nlekọta akụrụ Comprehensive (CKCC) n'ime KCC.
N'otu aka ahụ na ngosi nlekọta nlekọta dabere na uru gọọmentị gara aga, CKCC na-enye ohere ụlọ ọrụ dialysis, nephrologists na ndị na-ahụ maka ahụike ndị ọzọ ka ha guzobe otu ndị na-ahụ maka nlekọta gbasara akụrụ iji jikwaa nlekọta ndị ọrịa Medicare. Ihe na-eme ngosi CKCC pụrụ iche bụ na ọ na-akwalite mkpali ego iji jikwaa nlekọta ndị ọrịa Medicare nwere usoro CKD 4 na 5, iji gbuo oge mmalite nke dialysis na iji kpalie ntụgharị akụrụ.
CKD na-emetụta ihe dịka 1 n'ime 7 (nde 37) ndị okenye US. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị nwere CKD amaghị na ọrụ akụrụ ha na-ebelata. Ugbu a, ihe dị ka 50% nke ndị mmadụ chọpụtara na ha nwere ọdịda akụrụ "na-adaba" n'ime dialysis - ịmalite ọgwụgwọ na-enweghị ịdọ aka ná ntị na ọnọdụ mberede. Ọ bụghị nanị na mgbakasị ahụ na-akpata nchekasị anụ ahụ na nke mmetụta uche maka ndị ọrịa kamakwa ọ na-efu, na nkezi, mgbakwunye $53,000 maka onye ọrịa n'ime afọ mbụ nke ọgwụgwọ dialysis.
Ndị ọzọ, mmemme nlekọta ndị metụtara uru bara uru na-arụ ọrụ nke ọma na mkpa dị elu, ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa dị oke ọnụ, dị ka ndị nwere CKD na ọrịa akụrụ njedebe (ESKD). Mmemme ndị dị otú ahụ na-enye ndị ọrịa, ndị dibịa na ndị otu nlekọta aka inye aka igbu oge na-aga n'ihu CKD site na ijikwa ihe ize ndụ dị ka ọrịa shuga na ọbara mgbali elu-ihe abụọ na-ebute ESKD.
Maka ndị ọrịa nọ na mmemme CKCC, DaVita IKC na ndị mmekọ ya na-elekwasị anya n'ịhazi nke ọma akụrụ na mkpa nlekọta anụ ahụ na-abụghị nke akụrụ, yana imeziwanye ihe enyemaka iji nyere ha aka mee ka ahụike ha dịkwuo mma na ụlọ ọgwụ. N'ezie, ibelata ụlọ ọgwụ ọ bụghị nanị na-enye ndị ọrịa a ohere oge n'ụlọ na-eme ihe ha hụrụ n'anya kamakwa ọ nwere ike belata ọnụ ahịa nlekọta ahụ dum-ihe njirimara nke usoro nlekọta nlekọta ọ bụla na-aga nke ọma.
N'ihi na mmemme ndị a ga-erute ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ndị ọrịa Medicare n'ọtụtụ mpaghara obodo mepere emepe, DaVita IKC na-ahụkwa ohere iji nọgide na-enyere aka n'ịmepụta oke nha anya ahụike n'ime ntụgharị na nlekọta akụrụ n'obosara.
Site na mmalite nke mmemme CKCC ya, DaVita IKC na-atụ anya ka ọnụọgụ abụọ nke ndị ọrịa na-anata nlekọta akụrụ agbakwunyere na afọ mbụ arụmọrụ naanị. Na mgbakwunye na ọtụtụ mmemme nlekọta ahụike dabere na atụmatụ ahụike n'ofe US, nke a na-enyere aka ịkwalite ebumnuche DaVita IKC nke ibuga uru nke nlekọta akụrụ agbakwunyere na ndị ọrịa niile.
Ntinye aka DaVita na mmemme nlekọta bara uru na-emesi nkwa ya n'ozuzu iji jikọta na imeziwanye ahụmịhe na nlekọta n'oge ọ bụla yana ịhazi njem nlekọta akụrụ onye ọrịa. Ugbu a, DaVita na-achịkwa ndị ọrịa site na CKD ruo ESKD site na ntụgharị, ma na-eme ya n'agbanyeghị ma onye ọrịa na-eme ya n'ụlọ, n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ n'otu n'ime ụlọ ọrụ outpatient ya.
Kedu ihe na-ekpo ọkụ ugbu a na uwe anya maka 2022
Ọgwụgwọ enweghị ọmụmụ nwere ike ime ka ụkwara ume ọkụ na...